kudzoka kwaJesu - vanhu vaponeswe chete | Apg29
Pashure pezvose 300 mashoko aJesu okutanga kuuya azadziswa, zvinofanira kuti kwete zvose uprofita pamusoro wake kudzoka rini?
ikozvino tiri pakutanga ichi, pamwe okunze dambudziko, apo hunhu anodanidzira nenyevero yake? Pane zvirwere zvakadai seAIDS, Saar, Ebola uye ikozvino Corona utachiona iyo kuwedzera remadza rose nyika! A zvemari dambudziko zvino, izvo kare chinopfuura 2008 dambudziko, denda boka racho!
Kana tanga kuuya hwaJesu hunotaurwa 300 muBhaibheri, chakataurwa nezvacho kwake kwechipiri kuuya vanenge 556 nguva. Pashure pezvose 300 mashoko aJesu okutanga kuuya azadziswa, zvinofanira kuti kwete zvose uprofita pamusoro wake kudzoka rini?
"Naizvozvo, Kristu uyo ​​kamwe zvakabayirwa atakure zvivi zvevazvinji, kechipiri pasina chivi kuoneka vaya kumutarisira." Heb.9: 28
Mumakore 2000, zvave achishamisika: apo Jesu ndokudzoka nguva vatambi, akapa hwakazadzika? Mutambi mukuru kuna Israeri muna 1948, akatangazve nyika yavo, kuti pasinei makore kuitwa, akaramba tsika nemagariro avo, kuwana mutauro wavo: chishamiso waMwari!
In Luk.21 Jesu akataura pamusoro pamuonde, chiratidzo waIsraeri, sechiratidzo chokuti zhizha, Umambo hwaMwari hwava pedyo. Muna Mateo 24, Jesu akati:
Uye evhangeri iyi ichaparidzwa souchapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika!
Nhasi zvinonzi Bhaibheri mumitauro 2300 uye tumitauro, kufukidza 90%, uye ikozvino kudzoka kuna Israeri.
Jesu akati hondo, nzara, zvirwere, kudengenyeka kwenyika, chete kutanga kwekurwadziwa Umambo hwaMwari kuuya! Akaramba kutaura kutambudzika asina kubvira pakutanga kwenyika, uye hakuchazovipo.
Apo Jesu anotaura mugumo, anotora mafashamo yaNoa uye kuparadzwa kweSodhoma sezvo mufananidzo yomugumo. "Sezvazvakanga zvakaita mumazuva aNoa, vakadya, vakamwa, dzaroorwa kusvikira zuva Nowa raakapinda muareka. Ipapo mafashamu akasvika akavaparadza vose!"
"Sezvazvakanga zvakaita mumazuva aRoti, ari åt.dack, kutengwa, wakasimwa uye akavaka. Asi pazuva rakabuda Roti muSodhoma kwakanaya moto nesarufa zvichibva kudenga, zvikaparadza vose. Saizvozvowo, unofanira kuva nezuva Mwanakomana wemunhu kwakaratidza! " Lk.17: 26-30.
Mwari akaita vanhu kuti kurohwa? kwete, iye ane kununura zano vanhu vake!
Rangarira kuti Mwari akaponesa Noa naRoti mhuri vasati hasha dzinouya! Muna Mateo 24: 31, 40-41, Jesu anodzidzisa sei Mwari anobatsira vose vanoda uye kuwana rubatsiro rwake uye akanunura.
Sezvaungafungidzira, zviri pamusoro nokutenda muna Jesu Kristu, Muponesi wenyika. Zvakakwana Kwete chete chitendero yokunze, asi ukama Mwoyo Jesu pachake zvinofanira kuitika.
A kutendeutsa mwoyo, kuti vadzoke munzira chivi uye regai Jesu anoregerera uye kuchinja kubva mukati! Shoko raMwari rinoti:
"Zvino zvichaitika kuti ani naani anodana kuzita raShe achaponeswa!" Mabasa 2: 21
Jesu aida kuti rufu pamuchinjikwa, uye anoda kuponesa nokusingaperi iwe!